Yonke into ofuna ukuyifumana ukuze ube neentlanzi zika-Oscar | Ngeentlanzi
Intlanzi ka-Oscar (I-Astronotus ocellatus) ivela eMzantsi Melika. Ziintlanzi ezikhula kumathafa emilambo ngaphandle kweAmazon. Kude kube namhla, ezi ntlanzi zibanjiwe emachibini, kwimilambo, kwimisele nakumachibi aseFlorida, eMelika nakwamanye amazwe. Le ntlanzi yintlanzi ehlaselayo kule mimandla kwaye umthetho wohlwaya bonke abo babangenisa kwindalo.
Ngaba uyafuna ukwazi ukhathalelo, iimpawu kunye nomnqweno wentlanzi ka-Oscar?
1 Iimpawu zentlanzi ka-Oscar
2 Iimfuno ze-Aquarium
6 Izifo kunye namaxabiso
Iimpawu zentlanzi ka-Oscar
Iintlanzi zika-Oscar zithathwa njengeentlanzi ezinobundlobongela, oko kukuthi, Banobungakanani bommandla, kuba bekhusela indawo yabo, kodwa bengoyikisi ezinye iintlanzi. Oku kuyakuvumela ukuba, nangona bekwindawo, unokuba nezinye iintlanzi kwi-aquarium kunye nabo.
Ezi ntlanzi zingakhula ziye kuma malunga nee-intshi ezili-16 endle. Nangona kunjalo, kwii-aquariums inokufikelela kuphela imilinganiselo ye-intshi ezili-10 ukuya kwezi-14. Ukuba ikhathalelwe kakuhle kwaye ikwimeko ezifanelekileyo, inokuba neminyaka elishumi elinesihlanu yobomi.
Ngokombala, intlanzi uOscar inemibala eyahlukeneyo enje ngombala obomvu, ilamuni, ialbino, ingwe, ingwe ebomvu, kunye nealbino tiger.
Ubungakanani be-aquarium kufuneka banele ukubamba ubuncinci i-200 yeelitha zamanzi. Ukuba sifuna iimeko ezifanelekileyo, kuya kufuneka zibenjalo malunga neelitha ezingama-270. Oku kuyimfuneko, kuba intlanzi inkulu kakhulu kwaye kufuneka ibe nenkululeko xa iqubha. Ukongeza, kubalulekile ukuba i-aquarium inesiciko esivala kakuhle ukuthintela iintlanzi ukuba zingaxhuma. Ezi zilwanyana ziyathanda ukuya ngaphezulu emanzini zize zitsibe kuwo ukuze zifumane ukutya.
Enye yezinto ezenziwa kakhulu zezi ntlanzi kukumba. Xa ukuhombisa i-aquarium, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba baya kufuna igrabile okanye isanti njenge-substrate ukuze iintlanzi zikwazi ukumba. Ukuba ufuna ukuthenga izityalo eziphilayo okanye zeplastiki zokuhombisa, zilibale. Kwiifayile ze-oscars bayathanda ukwaphula kunye nokuluma izityalo eziphilayo kunye neplastiki, ke azizukuhlala ixesha elide.
Ukubagcina bonwabile, kwanele ukubanika isiqwenga somthi okanye umqolomba abangazimela kuwo. Njengezilwanyana zomhlaba, baya kukhetha icala le-aquarium abalibona likhuselekile kwaye baya kuhlala apho.
Amanzi etankini kufuneka abeneqondo lobushushu phakathi kwama-24 ukuya kuma-27 degrees, ukuthamba kunye ne-pH ejikeleze phakathi kwe-6,8 kunye ne-8.
Ezi ntlanzi zikhona isimilo sedimorphism. Oko kukuthi, akukho mahluko ubonakalayo phakathi kwendoda nebhinqa. Xa oku kusenzeka, ekuphela kwento onokuyenza ukwazi umahluko kukulinda ixesha lokuzala. Umfazi ulahla ityhubhu yakhe ukubeka amaqanda kwaye indoda inoxanduva lokuchumisa amaqanda ngelona lungu lakhe lesini.
Njengokuba ezi ntlanzi zijongeka ngokufanayo kunye ngeliso lenyama phakathi kwamadoda nabasetyhini, kunzima ukufumana isibini esitshatileyo nesimazi okokuqala. Ukuba banabancinci, kuya kufuneka ufumane indawo yokuhlala ii-Oscars ezisendleleni ukusukela, mhlawumbi, azizukulingana kwi-aquarium efanayo. Ukuba le meko iyenzeka kwaye awunazo izixhobo zokuyigcina, zithengise kwiivenkile ezizodwa okanye uzinike, kodwa ungazikhupheli kwindawo yendalo. Oku kubi kubo bobabini nakwinkqubo yezendalo.
Kungenzeka ukuba ngexesha lokuzala ii-Oscars zilwe kwaye ziyeke ukudibana. Kule nto kubalulekile ukuba ujonge kubo. Nje ukuba bakulungele ukuzalela, bazalela amaqanda elityeni okanye bacoca i-substrate. Banokubeka amaqanda ayi-1.000 XNUMX nganye.
Amantshontsho aqanduselweyo adla ngokuthatha malunga neentsuku ezi-3 zokuqandusela baya kuba ne-yolk sac eqhotyoshelwe kubo iveki. Ukunceda i-minnows entsha ikhule ngokuchanekileyo, kungcono ukubondla nge-brine shrimp, isikali esityumkileyo okanye i-shrimp yomntwana.
Ukuphakamisa i-minnows kwi-aquarium eyahlukileyo kuhlala kuyimpumelelo kuba abanye abazali bagqibela ngokutya abantwana babo. Xa usiya kutshintsha amantshontsho e-aquarium, kufuneka ulumke nabazali, kuba baya kuzama ukuluma wena ukukhusela abantwana babo.
Ukutya okuphambili kwezi ntlanzi kukutya, nangona kufanelekile ukuba ube nokutya okunokulinganisela ngokusemandleni. Ungamtyisa ukutya kwepelete kwaye uyongeze ngokunyanga okunje izinambuzane, iintshulube, ukutya okulungiselelwe ngumkhenkce, iipellets, kunye neelophilized. Ukuba utyisa izinambuzane, kubalulekile ukuba azichanabeki kwizibulali zinambuzane okanye ziya kutyhefa.
Ii-Oscars zine "mania" emdaka kakhulu yokutya. Kwaye xa behlafuna ukutya, bayakuphalaza baphinde bakutye kwakhona kwaye bakhafule. Ke kude kube ekugqibeleni bayityile. Kuba le nkqubo imdaka kakhulu, kubalulekile ukuba ube nococwe ngamanzi olungileyo kwi-aquarium.
Nangona ziindawo zentlanzi ezinobundlobongela, zinokuba nabanye oogxa bamatanki. Ngaphambi kokuba ungenise nayiphi na intlanzi ngokungacwangciswanga, kuya kufuneka uqaphele ukuba nayiphi na intlanzi leyo Ukuba u-Oscar uyangena emlonyeni wakhe, unokudliwa.
Ezona zihambelana nezinye ii-cichlids ezifana nazo, kwaye ukuba zinobungakanani obufanayo, zingcono. Iintlanzi ezifanelekileyo zezo zingadluli okanye zibe ndlongondlongo kakhulu.
Intlanzi Iidola zesilivere Benza njengeentlanzi ezihexayo, oko kukuthi, baya kudada ngokusebenzayo, ngendlela yokuba ii-Oscars zibabone kwaye bazive bekhuselekile.
Intlanzi iOscar inokuchaphazeleka sisifo se IHexamite. Sisifo esidala imingxunya entlokweni. Ingabonwa liqela lamacwecwe amhlophe avela kwiseli ye-necrosis yezihlunu zentloko.
I-Hexamithiasis ibangelwa yiprotozoan eflegiweyo ebizwa ngokuba yi-Hexamita. Iintlanzi zihlala zithwala i-protozoa ye-parasitic emathunjini abo ngexabiso elincinci lokutya. Iimeko zoxinzelelo ezinje ngokungonelanga kwenani labemi, umgangatho olungileyo wamanzi, utshintsho ngesiquphe kubushushu, ukutya okungalinganiyo kunye noluhlu olude lwezinto, kunokubangela ukuphindaphinda kwabaqeshi.
Amaxabiso entlanzi ka-Oscar ayahluka phakathi i-10 le-euro kunye nama-300, kuxhomekeke kubukhulu kunye nobudala.
Ngolu lwazi ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukufumana intlanzi ye-Oscar esempilweni kwi-aquarium yakho kwaye uyonwabele imisebenzi yayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi ka-Oscar